sosegado : ပီကာဆို နှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သူများကို ခံစားကြည့်ခြင်း
Posted by sosegado at 10/22/2010 08:22:00 PM
တစ်ချုို့က ဖတ်ရခက်တဲ့ ဖွန့်တွေနဲ့ ရေးကြတယ် ….. စတိုင်
မခံစားတတ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပုံမှန်လားမမှန်လားတောင် မသိတော့ဘူး...
အနုပညာကို ခံစားတတ်သလိုတော့ ခံစားမိပါတယ်
တစ်ခါတစ်လေလည်း ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့လည်း အပြောခံ ထိဖူးပါရဲ့
ဘလော့ရေးတာလည်း ရေးချင်တာတွေ ရေးထားတာ ဆိုပေမယ့် အနု ဖြစ်အောင်တော့ ရေးမိပါတယ်
အနုပညာ မြောက်မမြောက်ဆိုတာ ကိုတော့
စာဖတ်သူတွေပဲ ဆုံးဖြတ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ
အဲ.. ကျနော်လည်း တစ်ခါတစ်လေ မမှန်ချင်ဘူး
ခင်မင်လျက်။ ။ ဘရာဗို
တစ်ချို့ က လိုက်မမှီ တာနဲ့မော်ဒန်အတ် ပဲ လို့ 
ရေးဆွဲတဲ့ သူက သူ့ အိုင်ဒီယာနဲ့ သူဖန်တီးခဲ့ ပေမဲ့ 
လာရောက်ခံစားတဲ့ သူရဲ့ ဘယ်လောက်ကွန့် မြူးနိုင်သလဲ
ဆိုတဲ့ အပေါ်လဲ မူတည်ပါတယ်၊ များသောအားဖြင့် 
ရူးနေတဲ့ သူကလွဲလို့ ကျန်သူအားလုံးတော့ခံစားလွယ်
ကြမှာပါ၊မော်ဒန်အတ် က တော့အင်းခြွင်းချက်ဖြစ်မယ်။
ဒါပေမဲ့လူတွေကလဲ ယဉ်ယဉ်လေးရူးနေကြတာဆိုတော့ 
ခုနကပြောတဲ့ညပက္ခဒိန်လောက်ဟာလေးကို ဒေါ်လာသန်းချီ
ပေးဝယ်ကြတယ်၊ရောင်းတဲ့ သူကလဲ ရောင်းကြတယ်။
အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ကျနော် ပန်းချီဆရာ တွေရဲ့ ဘိုင်အိုဂရပ်ဖီ တွေကိုဖတ်တယ်... ခံစားနိုင်တယ် ဒါပေမဲ့ မူရင်းပန်ချီကား တွေကို ကြည့်ပြီးမခံစားတတ်ဖူး ကျနော့် ရဲ့ အနုပညာ အားနဲချက် လိုဘဲ သဘောထားလိုက်ပါတော့
တနှစ်ပြည့် ဆိုရင် ကျနော် ထက်ငယ်တယ်နော် အပြင်မှာ ပိုငယ်မှာ ... နှစ်တရာ တိုင်ပါစေဗျာ...
အနုပညာကို အဓိက အားဖြင့် ၃ မျိုးခွဲထားတယ်။
၁။ ပန်းချီနဲ့ တူသော အနုပညာ
၂။ ပန်းပုနဲ့ တူသော အနုပညာ
၃။ ဂီတနဲ့ တူသော အနုပညာ
ဆိုပြီးတော့. . . .
ပို့စ်အဖြစ်နဲ့ အကျယ် ရေးထားတာလည်း ရှိပါတယ်။
ပုံမှန် အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရောထက် စာရင်တော့ ပုံမမှန်တာ ကောင်းပါတယ်။ Clumsy လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါကို တနည်းအားဖြင့် အာလူးလို့ ခေါ်ကြပြီး ထိုအရာကို ပုံဖော်ဖြစ်သူများရဲ့ အနုပညာတွေက ပြောင်မြောက် တတ်ကြပါတယ်။
If you are in LA, pls visit Getty Museum.
SF MOMA hasagood collection of pop art too.
ပန်းချီ နဲ့ ပက်လိုကတော့ ပုံမှန်သလား မမေးနဲ့... ပန်းချီ Catalogue တွေကြည့်တာ တခုမှ နားမလည်လိုက်ဘူး... အဲဒါနဲ့ ပန်းချီ Catalogue တွေကိုထပ်ဖွင့်ကြည်ဖို့ မကြိုးစားဖြစ်တော့ဘူး...:D
တနှစ်မှသည် နှစ်တရာတိုင် အောင်ဆုတောင်းပေးပါတယ် ဗျာ...
လသာညက စိတ်ပညာရှင်မဟုတ်ပါဖူး။ လေ့လာနေတဲ့ ကျောင်းသူပါးD..။
ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း အကြောင်းကို ပြောကြရင် စိတ်ပညာရှင်တွေအများစုလက်ခံတာက လူတိုင်းဟာ ပုံမှန်မဟုတ်ဖူးတဲ့..။ နည်းနည်းမဟုတ်တာနဲ့ များများမဟုတ်တာပဲ ကွာတာ။ များများမဟုတ်တဲ့သူတွေကတော့ ထူးသူ(ထူးဆန်းသူ)တွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော။
ထူးတဲ့သူတွေထဲမှာ (ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သူများထဲမှာ) ပီကာဆိုအပြင် တခြားနာမည်ကြီး ပညာရှင်ကြီးသုံးဦးကို ဝေဖန်ထားတာဖတ်မိတယ်။ ရူးတယ်လို့ကို ပြောကြတယ်။ ပညာရှင် နယူတန်ကိုလည်း ရူးတယ်တဲ့လေ။ စိတ်ဝင်စားစရာ...နော်။
ဘလော့ဂါတွေက abnormal တွေလားဆိုရင်တော့ ကိုsosegado ပြောထားသလိုပဲ တွေးမိပါတယ်.. ဘလော့ဂါတစ်ဦးက သူ့ဘာသာ သူရေးချင်သလို ရေးထားပေမယ့် အဲဒီလိုသူရေးတဲ့ စတိုင်ကိုပဲ နှစ်သက်လို့ ပိုစ်တင်တိုင်း ပြေးဖတ်နေရတာက ပန်းချီကားကို ငါးသိန်းပေးဝယ်သလို တအားတန်ဖိုးရှိတာပဲ။
အဲဒီလိုအပြေးအလွှားဖတ်ရတဲ့ ဖီလင်ကို နားမလည်သူက “အချိန်ကုန်တယ်၊ ဗွီဒီယိုကြည့်မယ်ကွာ”လို့ လာပြောလည်း ခဏလေး ခဏလေး ဒါလေးတော့ ဖတ်လိုက်ဦးမယ်လို့ ပြောမိမှာ.း)))
အဲ့တော့ ဘလော့ရေးသူရော၊ ထိုဘလော့ဂါရဲ့ စာကိုစွဲဖတ်သူရောဟာ abnormal တွေပါလို့ ကျွန်မပြောရင် ရမလားဟင် :D
ခင်မင်စွာဖြင့် ကွန်မန့် အရှည့်ကြီးရေးမိသွားပြီ။
ပီကာဆိုပုံတွေကို နားမလည်ပေမယ့် ကြိုက်တယ်။ သူ့ပုံတွေ့ကြည့်တိုင်း ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ဇာတ်လမ်းအများကြီးဆင်နိုင်လို့လေ။ အခုလို စုစည်း အများကြီးတင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အနုပညာကို ခံစားဘို့အတွက် ဦးနှောက်ထဲတွင် သူ့အခန်းနဲ့သူရှိသည်ဟုဆိုသည်၊ ထိုသို့မဟုတ်ပါက ဘာမျှမခံစားရပေ ကမ္ဘာကျော်တယောဆရာ တယောထိုးပြနေသည်ကို ဒီကောင် တကျွီကျွီနဲ့ ဘာတွေတီးနေတာလည်းလို့ပြောလိမ့်မည်၊ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကနေတာကို ဒီကောင်မျောက်လိုခုန်နေတယ်လို့ ဆိုကြပါလိမ့်မည်၊ ကဗျာတွေရေးထားတာကို ပေါက်တတ်ကရတွေ ရေးထားတာလို့ ပြောပါလိမ့်မည်။
အနုပညာကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် အမျိုးမျိုး ရှိသလို သိပ်လဲကျယ်ပြန့်ပါတယ်.. ကိုယ်တိုင်လဲ ဒီလောက်ဥာဏ်မမီတဲ့အတွက် ဘာမှတော့ ထူးထူးခြားခြား မပြောတတ်ပါဘူး။
ဘလော့ရေးတာတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ချမ်းသာဖို့ ရေးတာဖြစ်ပါတယ်..
စိတ်မချမ်းသာတဲ့အကြောင်းအရာတွေ ကြုံလာရင်လည်း ဥပက္ခာသာပြုလိုက်ပါတယ်..
ဘလော့တစ်နှစ်ပြည့်မှသည် စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ အချိန်အထိ ပျော်ရွှင်စွာ စာတွေ ရေးနိုင်ပါစေ။
တစ်ချုို့က အမြဲစာလုံးပေါင်းမမှန်အောင်ရေးတယ်၊ ဓါတ်ပုံတွေကို မရှင်းအောင်ရိုက်တယ်၊
ကိုဆိုဆီရေ....တကယ်တော့လေ အနုပညာဆိုတာ သိပ်ကိုကျယ်ပြန့်လွန်းအားကြီးတယ်လို့ ကျနော်တော့ထင်မိတယ်။
အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် အက၊ အဆို၊ အရေး၊ အပြော၊ အပြလို့ အမျိုးမျိုးရှိကြပေမယ့် ကျနော့်အတွက်ကတော့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအမြဲ ဆက်စပ်ခံစားရလေ့ရှိတယ်။
အနုပညာရှင်တွေဟာ ပုံမှန်မဟုတ်သူတွေလို့လီယိုတော်စတွိုင်းဆိုတာကို ရာနှုန်းပြည့်လက်ခံမိတယ်။
ဟုတ်တယ်နော်.....ကျနော့်ဘလော့နဲ့ ရက်ပိုင်းပဲကွာတာပဲ။ တစ်နှစ်ပြည့်မှသည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ဗဟုသုတပေးတဲ့ ပိုစ့်ကောင်းတွေမြောက်များစွာကို ဆက်လက်ဖန်တီးသွားနိုင်ပါစေ.......
ပန်းချီကားတွေကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ကြည့်ပါ၊ ခံစားတတ်သွားပါလိမ့်မယ်
သန်းရာချီတန်တယ်ဆိုတဲ့ ပန်းချီကားတွေ တွေ့ရတိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ ဘယ်အရာတွေက ဒီလောက်တန်စေတာလဲ။ ဒါကိုကြည့်ပြီး ဘာခံစားရလဲ မေး နေမိလို့ပါ။
အနုပညာဖန်တီးသူက အခန်းပို ပါတယ်ဆိုတာတော့ ယုံကြည်ချင်တယ်။ လူတိုင်းမမြင်တဲ့ ရှုထောင့်က မြင်တတ်ကြတာဟာ အဲဒီအခန်းရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုနဲ့တူတယ်။
ဗန်ဂိုး အကြောင်းလေး ဖတ်ပြီးတော့ ပန်းချီဆရာတွေရဲ့ စိတ်ကို အနည်းငယ်တော့ သိလာရသလိုပဲ။
‘ဒီတစ်ယောက်က မခံစားပေမဲ နောက်တစ်ယောက်က ခံစားမိရင်ရော’
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခံစားမှုခြင်းတူကြမှာ မဟုတ်ဘူး၊ တချို့က ကျော်ဟိန်း မကြိူက်ဖူး၊ တချို့က လေးဖြူ မကြိူက်ဖူး၊
ခင်တဲ့ La Min
တစ်ခါက နိုင်ငံခြားက ဧည့်သည်တစ်ယောက်ကို လိုက်ပို့တော့ ပေါ်ဦးသက်ရဲ့ ပန်းချီကားကို သူလိုချင် လိုက်တာတဲ့။ ဒေါ်လာ သောင်းဂဏန်းဆိုရင် ပေးပြီး ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ သိန်းဂဏန်း ဆိုတော့ မတတ်နိုင်လို့ပါတဲ့။ သူဘာကြောင့် ကြိုက်သလဲတော့ ကျွန်တော်လည်း နားမလည်ပါ။
နည်းနည်းပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့ :) ) ။ပန်းပုကတော့ လုံးဝ
ကို ခံစားလို့မရ။ပန်းပုတစ်ခုကို ရုပ်တု တစ်ခုထက်ပိုပြီး
လူတိုင်းက ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ပုံမှန်ဆိုတာကရော
ပန်းချီ ကားတွေတော့ မခံစားတတ်ဘူး...ဝယ်ပြီ အလှတော့ ချိတ်ထားတတ်တယ်...
ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်ထားခဲ့တဲ့ မှော်ရုံတောမှာ မောလှပြီဆိုတဲ့ စာအုပ်တော့ ဖတ်ဖူးခဲ့တယ်....။
တချို့ကားတွေတော့ ခံစားလို့ မမှီပါဘူး....။
အနုပညာကတော့ ဖန်တီးမှု၊ ပါရမီ၊ ခံစားမှုနဲ့ ကြိုးစားမှုတွေကောင်းရင် ကောင်းသလို အရောင်လက်လာတတ်ကြတာအမှန်ပါပဲ....။
ကိုယ်နဲ့ မသိတဲ့လူတွေကို ရယ်ရအောင်၊ လွမ်းရအောင်၊ ငိုရအောင် လုပ်နိုင်စွမ်း၊ ကိုယ်နဲ့အတူ လိုက်ပါပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းရှိအောင် လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူးလေ......။ ပေးသူနဲ့ လက်ခံသူကြားမှာ အစပ်အဟပ်တည့်သွားမယ်ဆိုရင် လုံလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်....။
ပန်းချီကို ခံစားလို့ရတာ ရှိသလို မရတာလဲရှိတယ် ..ပန်းချီဆရာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်ရဲ့ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်ပါ ..ဒါပေမဲ့ ပန်းချီတွေ ကြည့်ရတာ ကြိုက်တယ် .. ဒါပေမဲ့ ဖန်တီးမှုတိုင်းက လူတိုင်းလက်ခံနိူင်တဲ့ အနုပညာမျိုး ဖြစ်ဖို့ကြ မလွယ်ဘူးဗျ ။ လူတကိုယ် အကြိုက်တမျိုးလို့ ဆိုထားတာကိုးလေ..
ပန်းချီကားတော့ မခံစားတတ်ဘူး...ဒါပေမယ့် ဟန်တလုံး ပန်တလုံးနဲ့တော့ ကြည့်ဖူးတယ်....မရပါဘူးဗျာ...လေတယ်။
ဂျူးရဲ့ ချစ်သူရေးတဲ့ ကျွန်မရဲ့ညတွေ ဖတ်နေရသလိုပဲနော်..ပန်ချီကားတွေနဲ့မို့လို့..။
ဘလော့လေးတစ်နှစ်ပြည့်မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ရေးပါလို့..။
Happy (1)Year Blog Annivessary....
ဘလော့ထဲကနေ ချွန်ပြီးခွဲထွတ်နေလို့ လေ-
အဲဒီ ပန်းချီကားတွေကိုတော့ မခံစားတတ်ဘူး တကယ်..ပန်းချီကားဆို ရိုးရိုးစင်းစင်းတွေပဲ ကြိုက်တယ်။ ပြီးတော့ တယောတို့ စန္ဒယားတို့.. မခံစားနိုင်ဘူး.. အနုပညာတိုင်းတော့ ဘယ်ခံစားတတ်မလဲနော်.. ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လိုင်းမှာပဲ ခံစားတတ်ကြတာပေါ့..
ခက်ရန်ကောဗျာ.. ကိုယ့်ကိုကိုယ် မှန် မမှန် စဉ်းစားနေရပြီဗျ။ ထားဗျာ။ share သွားတယ်ဗျ။ ကျေးဇူးအထူးပါ။
အကြောင်းရာတစခုကို သူတို့ ဘယ်လိုရင်ခုန်တယ်.. ခံစားတယ်ဆိုတာ လယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလို့တောင် ထင်ရတယ်..
အဲဒီအနုပညာဆိုတဲ့ အရာတွေ ထဲမှာပဲ ပန်းချီ၊ ပန်းပု လိုဟာမျိုးတွေကို ခံစားတတ်ဖို့ ဆိုတာ ခံစားသူကလည်း အများကြီး ဖြည့်ဆည်း(သို့) ပါရမီရှိဖို့လည်း လိုသေးတယ်ထင်တယ်.. ဥပမာ ပန်းချီမှာဆိုရင် သူတို့ဆွဲထားထားတဲ့ စုတ်ချက်တစ်ချက်က အပေါ်ကအောက်ကိုလား.. အော်ကက အပေါ်လား.. နောက် အရောင်တွေ ပထမအရောင် ဒုတိယအရောင်.. ကျွန်တော်လည်း ဘာမှကိုနားမလည်ပါဘူး.. အရင်ကတော့ ဆရာ ဇော်ဇော်အောင်ရေးတဲ့ မော်ဒန်ပန်းချီ စာအုပ်၊ ဆောင်းပါးတွေတော့ ဖတ်ဖူးတယ်.. ကိုယ့်နဲ့ မရင်းနှီးတာမို့ မေ့ကုန်ပါပြီ..
အကိုပြထားတဲ့ ပန်းချီပုံတွေ ကြည့်ရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာမိပါတယ်.. တစ်မျိုးလေးတော့ခံစားရတယ်..
တစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ ၀မ်းသာရပါတယ်.. နောင်အထိ စိတ်မမှန်တဲ့ (အဲ) ဘလော့ရေးနိုင်ပါစေ.. :D
ဟင့်အင်း ပန်းချီ ပန်းပု တွေ မခံစားတတ်ဘူး ကဗျာလဲ စပ်ဖို့နေနေသာသာ မခံစားတတ်ဘူး ဒါဆို ကိုယ်က အနုပညာသမား မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် ဒါဆို အကြမ်းပညာသမား လား ဟင် ကိုယ့်ဟာကို ခေါင်းကုတ်ပြီး မေးသွားတယ်
ပုံတွေ ကြည့်သွားတယ် နားမလည်ပါ (စိတ်မဆုိးနဲ့နော် နားမလည်ဘူးပြောလို့)
အဘောက်ကျ ပြောသလိုပဲ ကိုယ့်ဟာကို ပုံမှန်လား မမှန်လား မသိဘူး သိရင်ပြောပြနော် ခစ်ခစ်
ပန်းချီဆရာတွေနဲ့ ငယ်ငယ်ကနီးနီးစပ်စပ်နေခဲ့ဘူးတယ်။ သူတို့က နည်းနည်းတော့ ထူးခြားကြတာအမှန်ပဲ။ သူတို့ အနုပညာတွေ၊ သူတို့ အယူအဆတွေက ပုံမှန်ကနေတော့ လွတ်နေတတ်တယ်။ အဲ့ဒါကိုက ဖန်တီးမှုအားတွေ ပိုကောင်းစေသလားမပြောတတ်။ ပန်းချီကားတိုင်းမကြိုက်ဘူး။ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကြည့်နေတုန်း " သူက ဒီလိုလေးဆိုလိုတာလားမသိဘူးနော်.. " လို့ အဖော်လာညှိရင် အမြင်ကို ကပ်ရော။ ပန်းချီကားဆို တစ်ယောက်ထဲကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဟာကို တိတ်တိတ်လေး အဓိပ္ပါယ်ဖော်နေချင်မိတာမျိုး..။
ပီကာဆိုရဲ့ ပုံတွေကြည့်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ။ သိပ်တော့ ခံစားလို့မရဘူးရယ်။
အဲ.. မြသွေးနီလည်း ဟုတ်မှဟုတ်သေးရဲ့လားမသိ..။ :)
truth used to beaentertainment account it. Look advanced to more brought agreeable from you!
Look at my web page - password protection